Mapurojekiti ekutanga emahara eFSF | Kubva kuLinux
Iyo Yemahara Software Foundation (FSF - Yemahara Software Foundation) yakaburitsa a yakanyanya kukoshesa runyorwa rwemahara mapurojekiti; Iri bhuku rinotsvaga kutungamira vanozvipira kuti vashande pamwe navo.
Aya mapurojekiti haaitwe neFSF, asi anosimudzirwa nawo nechinangwa chekubatanidza vanogadzira nekusimudzira kuvandudzwa kwemahara software kunyorera, ayo anozopedzisira atsiva vamwe vavo vevowo.
Munguva pfupi yapfuura, semuenzaniso, imwe purojekiti yakadaro ichangopera: Kugovera Rutsigiro rwemahara rweRARv3 faira fomati.
1 GNU PDF - yepamusoro PDF rutsigiro
2 Gnash - yemahara Flash player
3 Coreboot - mushandirapamwe weBIOS yemahara
4 Yemahara Skype Kutsiva
5 Yemahara software yekugadzirisa vhidhiyo
6 Yemahara Google Earth kutsiva
7 100% yemahara kupihwa
8 GNU Octave - kutsiva Matlab
9 Kutsiva kweOpenDWG Raibhurari
10 Kudzoreredza kukanganisa mune iyo GDB
11 Mahara madhiraivha enetiweki ma routers
12 Yemahara kutsiva yeOracle Mafomu
13 Otomatiki kunyora
14 Vatongi vePowerVR
GNU PDF - yepamusoro PDF rutsigiro
Chinangwa cheprojekti GNU PDF kugadzira nekupa akateedzana emaraibhurari emhando yepamusoro kubata iyo PDF (ISO 32000) fomati faira, uye matekinoroji akabatana.
Nzira dzekubatsira: Kune mikana mizhinji yevanozvipira kutora chikamu mukugadzira chirongwa ichi, kubva pasi-chikamu C kuronga, webhu kuronga, kuverenga kuverenga zvinyorwa, kugadzira mifananidzo yekushandisa kwako. mune zvinoshandiswa, zvinyorwa uye software pachayo. Zvakare, unogona kufunga kugadzira zvakananga mupiro kuburikidza neFSF.
Gnash - yemahara Flash player
Mhunhu chirongwa cheGNU chekutamba Flash mafirimu. Flash ndeye maficha uye multimedia faira fomati kubva kuAdobe. Gnash yakavakirwa pa GameSWF, uye inotsigira mazhinji Flash (SWF) vhezheni yechinomwe, pamwe nedzimwe shanduro 7 ne 8. Kunyange hazvo Gnash inobata nzvimbo zhinji dzinozivikanwa nenhepfenyuro (seYouTube), ichiri kuda basa rakawanda kuti uve mutsivi wakazara weAdobe Flash Player. Kushanya http://www.gnu.org/software/gnash/ kune rumwe ruzivo nezve kuisa uye kushandisa Gnash.
Nzira dzekubatsira. Nzira iri nyore yekutanga kubatsira chirongwa cheGnash kushandisa chirongwa uye kurondedzera bugs. Kana iwe uchida kuziva kuti ungave unopa sei kune iyo Gnash chirongwa, funga kujoina iyo Gnash vanogadzira tsamba yekutumira (gnash-dev@gnu.org), iyo yeGnash tsamba yekutumira (gnash@gnu.org), kana kukupfuudza iyo #Gnash chiteshi pane irc.freenode.net.
Coreboot - mushandirapamwe weBIOS yemahara
Coreboot isoftware yemahara software inotarisirwa kutsiva yeiyo BIOS (firmware) iyo inogoverwa mumakomputa mazhinji nhasi. Muzviitiko zvakawanda iyo BIOS ndiro dombo chete munzira yemunhu anomhanyisa system yake achishandisa yega yemahara software (rumwe ruzivo Mushandirapamwe weBIOS yemahara FSF). Kushanya http://www.coreboot.org kuti udzidze zvakawanda nezve kusimudzira kweCoreboot, masisitimu akatsigirwa, uye maitiro aungatanga kumhanyisa mahara BIOS.
Nzira dzekubatsira. Imwe yenzira huru dzaungabatsire chirongwa cheCoreboot ndechekukurudzira vatengesi kuti vaburitse zvakatemwa zveBIOSes zvavanogadzira kuitira kuti Coreboot ikwanise kumhanya pane iwo masisitimu. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezvekuti ungava sei wekugadzira Coreboot, shanyira chiteshi #coreboot pa irc.freenode.net, kana kujoina iyo Coreboot yekutumira tsamba kutaura nevagadziri vemazuva ano. Imwe nzvimbo yekuwedzera uko kufambira mberi uye kutarisirwa kunodiwa kuri mukugadzirwa kweVGA BIOS yemakadhi emifananidzo. Tinokukurudzira kuti ubvumire vagadziri vemakadhi emifananidzo kuti vaburitse VGA BIOS yavo semahara software. Kana iwe uchida kutanga kuvandudza yemahara VGA BIOS, yakanaka yekutanga poindi ichave ye AMD's Geode LX chipset, yeiyo zvinyorwa zvese zviripo parizvino.
Yemahara Skype Kutsiva
Skype Inzwi repamutemo pamusoro pechirongwa cheIP iro rinoshandisa proprietary protocol. Skype yakanyengera vazhinji vashandisi vemahara software kuti vashandise proprietary software, kazhinji vashandisi vaviri panguva imwe chete. Kana tichishandisa proprietary telephony software hatigone kuve nechokwadi kuti ndiani ari kuteerera, nekuti hatigone kuona iyo kodhi kodhi. Hurumende yeChinese, semuenzaniso, yanga ichitsvaga hurukuro dzeSkype, uye vangangove vasiri ivo chete. Hatidi kukurudzira kugadzirwa kwe Skype inoenderana nemutengi, asi panzvimbo pezvo tinoda kukukurudzira kuti ugadzire, upe rubatsiro kana kusimudzira kushandiswa kwemahara software kutsiva kweSkype, senge Ekiga, uye kukurudzira kubvumidzwa uye kushandiswa kweVoIP yemahara , vhidhiyo, uye chat protocols senge SIP uye XMPP / Jingle.
Nzira dzekubatsira. Nzira iri nyore yekubatsira ndeye kusashandisa Skype uye kukurudzira kushandiswa kwesoftware kutsiva panzvimbo. Iko kune chirongwa chakateedzana, se Ekiga , Kupenya , Coccinella, QuteCom uye SIP Kutaurirana, izvo zvinotsiva zvakasikwa zve Skype. Sangana chirongwa chinovimba naJabber kupa musangano wekufona, unotsigirwa nerubatsiro kubva ku NLnet Foundation . NLnet inotsigirawo chirongwa ichi vhuraMSRP munzvimbo ino. Vashandisi veaya mapurogiramu vanogona kuendesa bug bug uye zvikumbiro kumapurojekiti Kana usiri mugadziri, iwe unogona kupa kune izvo zvinyorwa uye nekuisa pamwechete dzidziso dzemapurojekiti akadaro, pamwe nekuzivisa bugs, nezvimwe.
Yemahara software yekugadzirisa vhidhiyo
Vazhinji vashandisi vanokwezvwa kuti vashandise proprietary software ye kugadziriswa kwevhidhiyo, sezvo ivo vasingakwanise kuzadzisa mhedzisiro yavanoda vachishandisa akanakisa emahara emavhidhiyo ekugadzirisa zvirongwa. Vazhinji uye vazhinji vashandisi vemakomputa vari kuva vhidhiyo hobbyists mazuva ese, uye isu tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti mashandiro avo anouya nesoftware yemahara kuzadzisa zvavanoda.
Nzira dzekubatsira. Kune akatiwandei emahara evhidhiyo yekugadzirisa software zvirongwa, senge Kino, Cinelerra, Avidemux, Kdenlive, Lives, Lumierafuti PiTiVi, Blender, OpenShot and the Vhura Movie Mhariri Nzira iri nyore yekubatsira ndeye kushandisa vashanduri ava uye kukurudzira vamwe kuti vaite zvakafanana. Iwe unogona kubatsira aya mapurojekiti zvakananga nekutumira bug bug, uchiwedzera mitsva yekukumbira maficha, kugadzira dzidziso, magwara, nekuvandudza zvinyorwa.
Yemahara Google Earth kutsiva
Google Earth chirongwa chepropetiary software yekutarisa uye kududzira dhata remepu. Tinoda yemahara vhezheni yemutengi uyu. Kuwana iyo data yakapihwa neGoogle kunogona kusakwanisika, saka mutengi uyu anofanirwa kushanda neakasiyana masosi enhoroondo, kusanganisira data kubva kumahara mamepuro mapurojekiti senge Vhura Maps Maps.
Nzira dzekubatsira. Gadzira kana gadziridza 3D yekupa injini iyo inoverenga maKML mafaera pamwe neGoogle Earth. Batsira pakuparadzirwa kwemahara geolocation masevhisi senge Vhura Maps Maps, uye kubatsira muzvirongwa zvakaita Marble.
100% yemahara kupihwa
Mirairo yakaita gNewSense uye Trisquel yakatsaurirwa kupedzisa GNU / Linux anoshanda masisitimu ane chete yemahara software. Iwo maviri ezvinyorwa zvakadzama zvemhando yepamusoro zvekuparadzirwa izvo Debian neUbuntu zvinoshandura kuti vagadzire yakakwana yemahara yekushandisa system, isina mabhinari mabhuru uye mapakeji emiti ane epamhepo software.
Nzira dzekubatsira. Ona iro rakazara runyorwa rweGNU / Linux kugovera. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve chii chinoita kuti kugoverwa kweGNU / Linux kuve mahara zvachose, ona iyo nhungamiro dzekuparadzira mahara yeFSF. Iwe unogona zvakare kubatsira vamwe kugoverwa kwakakurumbira izvo parizvino hazvisangane nezvinodiwa kuti uve wakasununguka kuchinja.
GNU Octave - kutsiva Matlab
GNU Octave mutauro wepamusoro-soro, unonyanya kuitirwa kuverenga. Inopa rairo iri nyore yemutsara interface yekugadzirisa mitsara uye isina mutsetse matambudziko muhuwandu manhamba uye nekuita zvimwe zviyero zvekuyedza uchishandisa mutauro unoenderana naMatlab. Kushanya http://www.gnu.org/software/octave kuti uwane rumwe ruzivo nezve maitiro ekurodha pasi, kuisa, kushandisa, uye kutora chikamu mune iyo GNU Octave chirongwa.
Nzira dzekubatsira. Kurudzira kugadzira mapakeji epamusoro-soro muGNU Octave nechinangwa chekugadzira ekutsiva mabasa emapakeji akapihwa naMatlab. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve maitiro ekutora chikamu muGNU Octave nekujoinha yayo tsamba yekutumira uye tarisa peji "Rubatsiro rwaidiwa".
Kutsiva kweOpenDWG Raibhurari
OpenDWG muunganidzwa weCAD mafaera, iyo CAD fomati tsananguro, uye nhevedzano yeanobata software maturusi ekugadzira uye kushandisa CAD mafaera. Tinoda zvakafanana asi zvemahara.
Nzira dzekubatsira. Iyo GNU package MaharaDWG raibhurari yakanyorwa muC kuti ibate maDWG mafaera. Chinangwa chayo ndechekutsiva yemahara maraibhurari eOpenDWG. (DWG iri faira yemhando yeAccCAD.)
Kudzoreredza kukanganisa mune iyo GDB
La reversible debugging chishandiso chine simba, zviripachena. Kubva zvawakawedzerwa pane urwu runyorwa, iyo GDB (iyo GNU projekiti debugger) yaita imwe rutsigiro rwekugadzirisa kudzoreredza. Vanochengeta GDB vari kutsvaga vanobatsirana vanofarira kuvaka pane hwaro uhu kusimudzira rutsigiro rwekugadzirisa kusagadzikana.
Nzira dzekubatsira. Mubvunzo Ruzivo rwakazara pane rutsigiro rwazvino rwunopihwa neGDB rwekugadzirisa kusagadzikana, uye izvi yekuwedzera basa runyorwa (kumagumo epeji). Kana iwe uine chero mibvunzo, taura ne campaigns@fsf.org .
Mahara madhiraivha enetiweki ma routers
Mahara software mapurojekiti senge OrangeMesh ita kuti zvive nyore kushandura network ma routers kuita network mapindiro Mesh network. Nekudaro, hapana nzira yekumhanyisa OrangeMesh panguva ino pasina kushandisa software yeimba.
Nzira dzekubatsira. Rubatsiro runodiwa mukugadzirwa kwesoftware kwevatyairi vemahara uye yakaderera-chikamu software yekugadzirisa ma routers. Imwe nzira yekuita izvi nekubata mugadziri wechigadzirwa uye nekuvakumbira kuti vavhure iwo maratidziro uye / kana kodhi yevatyairi vavo pasi pemarezinesi emahara.
Kana iwe uchiziva ma routers ayo asingade kushandiswa kwechero software, ndapota nyorera FSF nekutumira email ku hardware@fsf.org. Mapurojekiti ari kutsvaga mari anofanirwa kufunga nezvekukumbira rubatsiro kubva iyo NLnet Foundation.
Yemahara kutsiva yeOracle Mafomu
Tinoda kutsiva yemahara maOracle Mafomu. Iyi software yaizobvumidza vanhu varikushandisa dhatabhesi yeOracle yekudyara kuti vatamire nyore kune dhatabhesi remahara, vasina kunyora zvekare zvese zvavanoshandisa uye nemashandisirwo avo.
Nzira dzekubatsira. - Kana iwe uchifarira kushanda pachirongwa ichi ,joinha tsamba yekutumira replacementforms-budiriro.
Tinoda software inokwanisa kunyora mazwi akarekodwa otomatiki. YouTube iri kutanga kupa sevhisi iyi, asi ichi chinhu chatinofanira kukwanisa kushandisa mahara software.
Nzira dzekubatsira. Kana iwe uchifarira kushanda pachirongwa ichi, ndokumbira undizivise uye ubatsire nekuvakwa kweiyo wiki peji.
PowerVR inozivikanwa 3D injini injini inowanikwa mumafoni, netbook, uye malaptop ayo atisati tine chero emahara madhiraivha anokwanisa kutsigira anodiwa 3D giraidhi kumhanyisa.
Ndechipi chimwe chirongwa chaunofunga kuti chinofanira kunge chiri pane urwu runyorwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Mapurojekiti ekutanga emahara eiyo FSF
Linux Mint 11 inowanikwa!